‘टंकप्रसाद आचार्यको राष्ट्रभाव, सबै नेताको लागि प्रेरणा’ - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
‘टंकप्रसाद आचार्यको राष्ट्रभाव, सबै नेताको लागि प्रेरणा’
आवाज अनलाइन १७ मंसिर २०७५, सोमबार
काठमाडौँ/संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भाषण गरेर हिँड्नु भन्दा स्व. टंकप्रसाद आचार्यको व्यवहारको अनुसरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका जनक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. आचार्यको १०७ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा स्व. आर्चायको प्रतिमा अनावरण गर्दै मन्त्री पण्डितले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्राङ्गणमा निर्मित स्व. आर्चायको अर्धकदको प्रतिमाको अनावरण गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले आफ्नो जीवनमा २०४३ सालमा एक पटक मात्र पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. आर्चायसँग भेट भएको स्मरण गर्दै आचार्यले राजनीतिमा देखाएको राष्ट्रभावको अहिलेका सबै राजनीतिज्ञहरुले अनुसरण गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं टंकप्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानका सल्लाहकार तथा भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदुत निलाम्वर आचार्यले स्व. आचार्य सरल, इमान्दार तथा राष्ट्रवादी नेता भएको वताए । कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री तथा संघीय सांसद महेश बस्नेतले स्व. आचार्यको जीवनी सम्पूर्ण राजनीतिककर्मीहरुको लागि अनुकरणीय रहेको बताए । सोही कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी सदस्य तथा पूर्व महालेखा परिक्षक बद्रीबहादुर कार्कीले स्व. आचार्यको नेपालमा रहेको राजनीतिक जीवन सार्थक रहेको बताए । उनले निजामती कर्मचारी ऐन तथा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा ठूलो परिवर्तन आएको बताउँदै हाल सञ्चालनमा रहेको निजामती अस्पताललाई स्व. टंकप्रसाद आचार्य निजामती अस्पताल नामाकरण गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिमा अनावरण कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कार्यकारी सदस्य शान्ता मानवी, सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव थापा लगायतले स्व. आचार्यको योगदानको चर्चा गरेका थिए ।
टंकप्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अरविन्द रिमालको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा स्व. आचार्यकी छाेरी मिना आचार्य, राजनीतिक दलका नेता, सूर्वविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेत, पूर्व महालेखा परिक्षक भानु आचार्य, पूर्व सचिव माधव रेग्मी लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।